191 okushiwo abanye
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Charlie And Sharon
U-Charlie And Sharon uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-90% wezivakashi zakamuva.
Siyakwamukela ku-Little House! Le ndawo yokuhlala ethobekile iyindawo yokuphumula efanelekile yesihambi esikhathele noma indawo ekahle yalabo abathanda ukuhlola iFremont County! Izivakashi zizojabulela indawo yasemaphandleni ethule, nokho zisakwazisa ukusondela kwedolobha nezindawo ezikhangayo. Sicela hhayi izilwane.
I-Little House ingamamitha-skwele angama-600. Isakhiwo sihlanganisa igumbi lokugezela elincane (elinokugeza), igumbi lokulala, igumbi lokuhlala, ikhishi kanye nompheme ongaphambili. Lesi sikhala sinezinto ezibalulekile kuphela. Izivakashi zikhuthazwa ukuba zizisize ziye engadini! Siyakujabulela ukwabelana ngezithelo (nemifino) yomsebenzi wethu kanye nokushintshanisa izindlela zokupheka.
4.89 ·191 okushiwo abanye
4.89 out of 5 stars from 191 reviews
4.89 · 191 okushiwo abanye
Ibungazwe ngu-Charlie And Sharon
Indlu encane itholakala entshonalanga yendawo enkulu. Sihlala endlini enkulu futhi sizoqhubeka nemisebenzi yethu yansuku zonke njengenjwayelo (ukunisela ingadi, ukugawula izinkuni, ukugunda utshani, ukulima iqhwa, njll.). Sicela ulindele izinga elithile eliphansi ukuya kwelimaphakathi lomsindo ekuseni kanye nokusebenzisana okunobungane ngokudlulayo.
Indlu encane itholakala entshonalanga yendawo enkulu. Sihlala endlini enkulu futhi sizoqhubeka nemisebenzi yethu yansuku zonke njengenjwayelo (ukunisela ingadi, ukugawula izinkuni,…
UCharlie And Sharon Ungumbungazi ovelele